Ibsa Qulqulluu Sinoodoosiin laatee – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Ibsa Qulqulluu Sinoodoosiin laatee
April 22, 2015 /in Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
Qulqulluu Sinoodoosiin ijoollee Mana Kiristaanaa ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaa Billa Liibiyaatti ajjeesaman ilaalchisee ibsa yeroo lammaffaadhaaf kenne
Eebila 13, Dn. Mazgabuu Kafyaalawuun
Qulqulluu Sinoodoosiin namoota Kiristaanota Hordoftoota amantaa Kiristaanaa biyya Liibiyaatti Garee Shororkeessaa ISIS tiin ajjeechaa suukkanneessaadhaan ajjeesaman ilaalchisee har’a eebila 13 waajjira addaa Qulqulluu Paatriyaarikiitti yeroo lammaafaadhaaf ibsa laateera. Ibsa isaa haala armaan gadiitiin dhiyeessineerra:
Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Afuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen!
Kan sababa Amantaa isaaniitiin dabaan irra gahu Mootummaa Waaqayyoo ni hirmaatu ( Maat 11:12)
Afrikaa Kaabaa Liibiyaatti ijoollee mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaa irratti yakka ajjeechaa raawwatame ilaalchisee Sinodoosii Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaa irraa irra deebi’uudhaan ibsa kenname.
Gareen shororkeessaa mataa isaa “ ISIS” jechuudhaan waamu Eebila 11, bara 2007 Afrikaa Kaabaa biyya Liibiyaa naannoo qarqara galaana meeditiraaniyaatti ijoollee Mana kiristaanaa irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwachuun isaa beekameera.
Akkuma namoota hunda birattio beekamu ergamni manneen amantaa hundaa nama fayyisuu malee nama ajjeesuu akka hin taane ni amanama. Haata’u malee yakki ajjeechaa manneen amantootaa kam birattuu kan fudhatama hin qabne sababa amantaa isaaniitiin lammiiwwan balleessaa hin qabne haala suukkanneessaa ta’een naannoo addunyaa kanatti mul’achuu erga eegalee oolee buleera.
Lammiiwwan keenya Itiyoophiyaanonni yeroo adda addaa fi bakka adda addaatti saaxilamtoota ajjeechaa akka kanaa ta’uun isaanii hin hafne. Gama kanaan torbee kana biyya Liibiyaa fi biyya Aafrikaa Kibaatti ijoolota keenya hordoftoota amantaa kiristaana ortodoks tawaahidoo ta’an irratti raawwatame hunda caala mana kiristaanaa keenya kan yaaddessee fi klan gaddisiise ta’ee argameera.
Waan kana ta’eefuu Qulqulluun sinoodoosii mana kiristaanaa ortodoks tawaahidoo Itiyoophiyaa ajjaachaan sukkanneessaan raawwatame kun mana kiristaanaa ortodoks tawaahidoo Itiyophiyaa qofa irratti kan raawwatame osoo hin taane manneen amantootaa addunyaa hunda irratti ken hiixatame hojii yakkaa ta’uu amanuun uummanni biyya keenyaa martii fi dhaabbileen hundinuu akkasumas hawaasnii fi mootummoonni addunyaa gochaa kana cimsee balaaleffachuu fi balfachuu irra darbee furmaata hiika qabu akka barbaadu gaafachaa ibsa itti aanu kenneera.
Jechuudhaan ibsa ejjennoo qabxii sagal qabu kan kaa’e yoo ta’u, isaan keessaas manni kiristaanaa gochaa badii gareen shororkeessaa ISIS ijoollee mana kiristaanaa Qulqulleetti ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaa ta’an irratti raawwate balaalfeffattee jirti. Garee gochaa kana raawwates uummanni addunyaa akka balaaleffattu gaafatteetti.
Dabalataanis warren gochaa shoprorkeessitootaa kanaan ajjeefamaniif kadhannaan fitaatii akka taassifamuuf, biyya keessaa fi biyya alatti boru, eebila 14 bara 2007 irraa eegalee guyyoota torbaaf sirni kadhannaa mihillaa akka labsamu Quqlulluun sinoodoosiin ibsa laatee jira.
Ijoollee mana kiristaanaa amantaa isaaniitiif jedhanii ajjeefamaniifis akkaataa darbaadarbiinsa mana kiristaanaa fi sirna mana kiristaanaatiin kabajni Wareegamummaa barbaachisu akka kennamuuf maatiin ijoolee ajjeefamanii footoo fi odeeffannoo wareegamtoota sanaa hatattamaan qulqulluu sinoodoosiidhaaf akka dhiyeessu waamicha dabarsee jir.
Dabalataanis uummanni Itiyoophiyaa akkuma durii amantaadhaan osoo adda wal hin qoodiin tokkummaadhaan, jaalalaan, fi wal danda’uudhaan akka jiraannu waamicha isaa dhiyeesseera.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2015-04-22 09:36:112018-10-26 09:21:20Ibsa Qulqulluu Sinoodoosiin laatee
Sinodos Seenaa Haadha Keenya Qulqulleetti Dubree Maariyaam